Deadly cyclone heads for Zimbabwe
The floods have already destroyed 5 756 homes, affecting 15 467 households and 141 325 people.
A deadly cyclone that has claimed more than 100 lives in Mozambique, Malawi and South Africa and affected more than 843 000 people across southeast Africa, is now heading to Zimbabwe, the Met Department has warned.
Meteorological services Department on Thursday said Cyclone Idai was now heading to the Eastern side of the country that includes Masvingo, Manicaland, Mashonaland East and Central provinces which should start experiencing cloudy and windy conditions with isolated thundershowers.
“From tomorrow, due to increased moisture after the expected landfall of tropical cyclone Idai, it is expected to be cloudy across the country with intermittent moderate rainfall over Masvingo, Manicaland, Mashonaland East and Mashonaland Central. Tropical cyclone Idai, after landfall it is expected to take a north-westerly trajectory moving further inland reaching Zimbabwe by the 17th of March 2019. If the projected movement of the cyclone is maintained, this should continue to bring moisture over most parts of Zimbabwe with significant rainfall of at least 30mm in 24hours over Masvingo, Manicaland, Mashonaland East and Mashonaland Central,” the Met Department said.
In Mozambique, the government has decreed a red alert due to the continuing rains and the approach of the tropical Cyclone Idai, expected to reach the country between Thursday to Friday.